केटा र केटीबीच विवाह कसरी जुराइन्छ ?
ज्योतिष बलराम उपाध्याय खकुरेल
ज्योतिष शास्त्रमा बिभिन्न कुराहरुको वर्णन गरिएको छ । हिन्दु धर्मशास्त्रहरुका अनुसार कुनै पनि केटा र केटीको विवाह गर्दा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विचार गर्नुपर्छ । यस कुराको विचार ज्योतिष गणनाको आधारमा हुने गर्छ । कसरी केटा वा केटीको विवाह जुर्छ जुर्दैन थाहा पाउने गरिन्छ त ?
प्रायः विवाह जुर्छ कि जुर्दैन भनेर केटा र केटीको गुण हेर्ने गरिन्छ । यसरी गुण मिलाउनको लागि विशेष गरेर ८ कुराको विचार गरिन्छ । ति हुन् :— १) वर्ण, २) वश्य, ३) तारा, ४) योनी, ५) ग्रह मैत्री, ६) गण, ७) भकुट र ८) नाडी
यीमध्ये प्रत्येकमा निश्चित गुणहरु रहन्छन् । यसरी यी ८ वटा कुराको गुणको संख्या मिलाउँदा जम्मा ३६ गुण हुन्छ । यसकारण ज्योतिष शास्त्र अनुसार हरेक मानिसमा ३६ गुण हुन्छ । यही गुणको आधारमा उसका स्वभावहरु पनि हुने गर्दछन् । विवाह जुर्छ कि जुर्दैन भन्ने कुराको विचार गर्दा केटा र केटीको यही ३६÷३६ गुणमा कति गुण मिल्छ हिसाब गरिन्छ । यसमा ३६ गुण मात्र विचार गर्ने भएकाले कहिले पनि विवाह जुराउँदा ३६ भन्दा बढी गुण आउँदैन ।
ज्योतिष शास्त्रमा केटा र केटीको कुण्डली विचार गर्दा कम्तिमा पनि १८ गुण मिल्नैपर्छ । १८ भन्दा कम गुण आएमा विवाह जुर्दैन । १८ देखि २० गुण सम्म अएमा यसलाई मध्यम मानिन्छ । २१ देखि ३० गुण सम्म गुण आएर विवाह भएमा यसलाई उत्तम सम्बन्ध हुने मानिन्छ र ३० देखि ३६ सम्मको गुण आएमा सम्बन्ध अति राम्रो हुने ज्योतिष शास्त्रको मान्यता रहेको छ ।
यसरी कुण्डली जुराउँदा एउटाको राशिदेखि अर्कोको राशि छैटौँ वा आठौमा पर्नु चाहिँ राम्रो मानिँदैन । यसलाई षडाष्टक दोष भनिन्छ । एउटाको राशिदेखि अर्कोको राशि एकआपसमा दोश्रो र बाह्रौँमा पर्नुलाई पनि अशुभ मानिन्छ । यसलाई द्विद्वादश दोष भनिन्छ भने, एक अर्काको राशि पाचौँ वा नवौँमा पर्नुलाई पनि खासै राम्रो मानिँदैन । यसलाई नवम पञ्चक दोष भनिन्छ । यदी विवाह जुराउँदा षडाष्टक, द्वि–द्वादश र नवम पञ्चक दोष नभएमा १६ गुण भन्दा माथि आए पनि विवाह गर्नु शुभ हुन्छ ।
विवाह जुराउँदा यी ८ कुराको विचार गरेर गुण अर्थात् स्वभाव मिल्छ कि मिल्दैन भनेर जानकारी लिनैपर्छ । यदि गुण राम्रो मिल्दैन भने विवाह पछि सम्बन्ध पनि राम्रो हुन सक्दैन भन्ने ज्योतिष शास्त्रको मान्यता रहेको छ । मांगलिक योग हुँदैमा डराउनु भने पर्दैन । किनकी यो संसारमा लगभग ४० प्रतिशन मानिस मांगलिक हुने गर्दछन् । मांगलिक योगले सम्बन्धमा समस्या ल्याउने भएपनि यसले व्यवसायिक रुपमा भने मानिसलाई निकै सफलता दिने मानिन्छ ।